Shiinaha 1 xabbo Alkolo / Hyamine masax warshad iyo soosaarayaasha | Zhongrong
Waxqabadka bakteeriyada ee sheygan waxaa lagu tijaabiyaa iyadoo loo eegayo heerka qaranka hay'adda baaritaanka u qalmidda ee khuseysa. Qiyaasta nadiifinta ee wax soo saarkan ee ka dhanka ah Escherichia coli, Staphylococcus aureus iyo Candida albicanS waxay gaari karaan 99.99% xaaladaha tijaabada hal daqiiqo. Natiijooyinka waa tixraac.
1 Piece Xirmo ee 75% Akhamriga Wipe
1.1 Soo-jeedinta bacda baakadaha lagu talinayo ended
Length * width * height 120 * 70 mm
1.2 Nuqul ka kooban ：
1 gabal halkii xirmo xirmo ah
Isticmaalka: Ku jeex jeex jeebka si aad u isticmaasho. Waqtiga ficilku u socdo gacmuhu waa min 1min, waqtiga waxqabadka maqaarka aan fiicnayn waa int5min, waqtiga tallaabada walxaha caadiga ahna waa min30min.
Waxyaabaha saafiga ah: 1pc
Hore: 2.5L 75% Daawada jeermiska Aalkolada TECH-BIO
Xiga: 50 xabbo Alcohol / Hyamine Wipe